दिनकै ३० जनासंग सेक्स गर्दाको अनुभव कसरी सुनाउँ म तपाईलाई ?
May 5, 2021 N88LeaveaComment on दिनकै ३० जनासंग सेक्स गर्दाको अनुभव कसरी सुनाउँ म तपाईलाई ?
२० वर्षअघिको कुरा हो, १४ वर्षकी त थिएँ म । यस्तो समस्या भोगिरहेको यो जिन्दगीको कथा सुनाउँ कसरी । यो सुन्ने जोकोहीको ज्यान काँप्छ । यस्तो एउटा कहानीको पात्र हुँ । हो, या कहानी एउटा यस्तो महिलाको हो, जो यो जीवनबाट गुज्रिएर अहिले यस्तै आहतलाई न्याय दिन लागिरहेकी छिन् र उनको जिन्दगीलाई सबैले सलाम गरिरहेका छन् । मेरो […]
दिल्लीको कोठीमा बेचिएकी चेली ग्राहकसितै प्रेममा परेपछि……..
May 5, 2021 N88LeaveaComment on दिल्लीको कोठीमा बेचिएकी चेली ग्राहकसितै प्रेममा परेपछि……..
काठमाण्डौं । नुवाकोटको विकट गाउँमा जन्मिएकी सुस्मिता (नाम परिवर्तन) ले १४ वर्षको कलिलो उमेरमै मातृ स्नेहबाट बञ्चित हुनुर्पयो । आमा गुमाएको पीडा आलै छँदा बुबाले कान्छी श्रीमती भित्र्याए । सुरुवाती दिनमा सौतेनी आमाले राम्रै व्यवहार गरिन् । तर, बिस्तारै ‘सौतेनी व्यवहार’ देखाउन थालिन् । विद्यालय पठाउने त कुरै छाडौं, मानसिक र शारीरिक यातना उनका लागि […]
May 5, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिनुपर्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्रकै माधव नेपाल समुहले के गर्ला भन्नेमा विभिन्न आंकलन आएका छन् । सांसदबाट सामुहिक राजिनामा, बैठकमा फ्लोरक्रस वा अनुपस्थित रहने खालका बिकल्पमा उहाँहरुबीच छलफल चलिरहेको समेत बाहिर आएको छ । तर अव समय धेरै छैन । बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सम्ममा माधव […]
श्रीमतीलाई कसरी यौ… सन्तुष्ट पार्ने ? जान्नुहोस
May 5, 2021 September 15, 2021 N88LeaveaComment on श्रीमतीलाई कसरी यौ… सन्तुष्ट पार्ने ? जान्नुहोस
एजेन्सी । दाम्पत्य जीवनलाई हरिलोभरिलो, सुखी र सुन्दर बनाउन सहवासको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । से “क्स अर्थात् सम्भोग । सम्भोग अर्थात् समान सहकार्य, समान साथ र समान संलग्नतामा सम्पन्न हुने क्रिया । हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा श्रीमान्हरू सेक्स भनेको केवल आफूले आनन्द लिने विषय ठान्छन् । उनीहरू बिर्सन्छन् कि श्रीमतीको पनि आनन्द लिने र सन्तुष्ट हुने […]
यी नामका युवतीहरू हुन्छन् प्रेममा बफादार, छोड्दैनन् पार्टनरका हात !
May 5, 2021 May 5, 2021 N88LeaveaComment on यी नामका युवतीहरू हुन्छन् प्रेममा बफादार, छोड्दैनन् पार्टनरका हात !
प्रेम मानिसको लागि एकदमै अत्यावश्यक मानिन्छ । भनिन्छ प्रेमले नै संसार चलेको हुन्छ त्यसैले प्रेम विनाको संसार कल्पाना गर्न समेत सकिदैन । तर अहिले प्राय युवतीहरु युवकको पैसा र अनुहार हेरेर नै प्रेम गर्ने गर्छन् तर केही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्ने गर्छन् । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने […]
काठमाडाैंमा विवाहका लागि १५ जना जन्ती र दुईवटा गाडी लैजान पाइने
May 5, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडाैंमा विवाहका लागि १५ जना जन्ती र दुईवटा गाडी लैजान पाइने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञाको समयमा विवाह र ब्रतबन्धका लागि १५ जना व्यक्ति र २ वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विवाह र ब्रतबन्ध गर्दा १५ जनासहित २ वटा सवारी साधन प्रयोग गरी ब्यानरका आधारमा जिल्लाभित्र वा अन्तर जिल्लामा आवत जावत गर्ने पाउने […]
भगवानलाई जल चढाए कोरोना भाग्ने हल्ला फैलिएपछि…
May 5, 2021 N88LeaveaComment on भगवानलाई जल चढाए कोरोना भाग्ने हल्ला फैलिएपछि…
एजेन्सी । गुजरातको अहमदाबादस्थित साणंद क्षेत्रमा एउटा अफवाह फैलिएपछि हजारौँको संख्यामा मानिसहरु भेला भएका छन् । यस घटनासँग जोडिएको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा महिलाहरुको ठूलो भिड टाउकोमा पानीको गाग्री बोकेर हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ । कसैले हिन्दू देवता बलिया देवलाई जल अभिषेक गरे मानिसहरु कोरोनाबाट बच्न सक्ने हल्ला फैलाए पछि निधराड […]
बुढानिलकण्ठमा चुँड्यो ओलीको सत्ता बचाउने आशाको त्यान्द्रो, देउवालाई भेटेपछि आकाश खस्यो घर्ती भासियो
May 5, 2021 N88LeaveaComment on बुढानिलकण्ठमा चुँड्यो ओलीको सत्ता बचाउने आशाको त्यान्द्रो, देउवालाई भेटेपछि आकाश खस्यो घर्ती भासियो
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने थप स्पष्ट पारेको छ । आज बुधबार देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिएर आफूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले पार्टीले समेत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् […]
कोरियाली कम्पनीले १५ दिनमा मात्र ३ लाखमा बनाउँछ यस्तो घर
May 5, 2021 N88LeaveaComment on कोरियाली कम्पनीले १५ दिनमा मात्र ३ लाखमा बनाउँछ यस्तो घर
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई सिधै फोन गरेर जिम्मा दिनुहोस! फोन नम्बर सहित् काठमान्डौ , कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले( SY Nepal) आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल […]
May 5, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाबारे भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ बारे अफवाह फैलाउने गरी भ्रामक समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित छलफलमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पछिल्ल्लो समयमा मिडियामा जनतालाई आतङ्कित गर्ने गरी समाचार आउने गरेको बताउँदै सत्यतथ्य मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभयो,“यो बेला भनेको सकारात्मक […]